အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ရှုပ်ထွေးတဲ့ အချစ်
ခု ခေတ်စားနေတာ ရှုပ်ထွေးတဲ့ အချစ်ပေါ့။ Facebook ပေါ်မှာ ဆို လူတွေက ရီလေးရှင်းရှစ်ပ် စတေးတပ်စ်မှာ complicated လို့ တင်ကြတဲ့ ခေတ်ကိုးနော်။ ရှုပ်ထွေးတယ် ဆိုတာကတော့ တချိန်တည်း တပြိုင်တည်းမှာ တယောက်ထက်ပိုသော လူများနဲ့ ဒိတ်နေတယ် (ဝါ) ချစ်ကျွမ်းဝင်နေတယ် (ဝါ) လေ့လာရင်း တွဲနေတယ် စသဖြင့်ပေါ့ အဓိပ္ဗါယ်ရပါတယ်။
ရှုပ်ထွေးတဲ့ အချစ်တွေကို ကျွမ်းကျင်သူများ လေ့လာကျင့်သုံးသူများ ဟာ အရင်ကတည်း က ယောက်ျားသားများက အများစုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျောင်းသား ဘဝ မှာကတည်းက ရုပ်ရည် ပြောစမတ်ပြုလောက်စ ရာမရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းယောက်ျားလေး တယောက်က တပြိုင်တည်းမှာ ရည်းစား ကောင်မလေး ၅ ယောက်ထားတာ သိဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကောင်မလေး ၅ ယောက်ထဲမှာ တချို့ က တပြိုင် တည်းမှာ သူ့ကောင်လေးမှာ တခြား ကောင်မ လေးတွေရှိနေတာ ကို သိနေပြီးတော့ တချို့ကျ တော့လဲ ဘာမှ မသိအောင် ရွှေတံခါးကြီး ပိတ် ဂျိတ် အမှောင်ထဲ မှာ ဖုံးကွယ်ထားခံနေရတာပါပဲ။ တကယ်ပဲ ကိုယ့်ရည်စား ကောင်
လေးက ကျောင်းစာတွေနဲ့ ပိနေလို့ သူ့ကို အချိန်မပေးနိုင်ဘူးမှတ်နေတယ်။ သနားစရာပေတည်း (ခုတလော ကြည်အေးတွေအဘတ်များနေတယ် ခွင့်လွှတ်ကြပါ သူနဲ့ တူအောင် အတင်း ပေတည်းလိုက်ရပေမယ့် ဟန်ကတော့ ကိုယ့်ဟန်ပါပဲ လွှဲမရပါ)။
ခုခေတ်ကတော့ ခေတ်ကြီးပြောင်းလဲ လာပါပြီလေ။ ရှုပ်ထွေးတဲ့ အချစ် (ဝါ) ကွန်ပလီကိတ်တက် ရီလေးရှင်း ရှစ်ပ် လို့ စတေးတပ်စ် တင်သူတွေမှာ မိန်းကလေး အရေအတွက်ကလဲ ရှုပ်ထွေးစွာ ရေတွက်ရမလို ကွန်ပလီကိတ် တက် အနေအထားရောက်လို့လာလို့ပေါ့။ နားရှုပ်ကုန်ပလား။ ဒီလိုလေ ခုခေတ်မှာ မိန်းမတွေ ရဲ့ ဘဝ ရည်မှန်းချက် ဟာ အရင် အိမ်ထောင်ကျ သားမွေး အိမ်တဆောင် မီးတပြောင်နဲ့ ကျေနပ် ရမယ့် ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးလေနော်။ တို့တွေ ရဲ့ မိုးကောင်ကင်ဟာ ခေတ်နဲ့အညီ အဆုံးအစ မရှိ ကျယ်ပြောလာတဲ့ အခါ တို့တွေရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ကလဲ ခေတ်ကို အမီ လိုက်ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးလာရတော့မယ်။ သားကို သခင် လင်ကို ဘုရား ဆိုတာ ကိုယ်တွေ ရဲ့ ဘဝ လမ်းဆုံး မဟုတ်တော့ဘူးလေနော်။ (ဤနေရာတွင် ခေတ်မီ ပညာတတ်မိန်းမ များ တီချမ်း ကို ထောပနာ
ပေး၍ မဟာဖို ဟု သူတို့ ကိုယ်သူတို့ယူဆ သူယောက်ျားများ ဒီ အြေ-ာက်မ မဟုတ်တာတွေ ရေးပြန်ပြီဟု ထောပ
အချစ်ရေးမှာ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်ရခြင်း (ဝါ) ရည်းစားများရခြင်းဆိုတာ တနည်းအားဖြင့်တော့ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် ရင့်ကျက် နားလည်ရခြင်း ဖြစ်စဉ်တခုလဲဖြစ်တယ်။ မိန်းမတွေ အတွက် မတူညီတဲ့ ယောက်ျားတွေဆီကနေ ကိုယ့် အကြောင်း ကိုယ် ပိုနားလည် စေတယ် ကိုယ်တိုင်တောင် သတိမထားမိတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အခြားတဘက်ကို ကိုယ့် ကိုကိုယ် တဖန် ပြန် မိတ်ဆက်ပေးသလို ဖြစ်စေတယ်။ နောက်ပြီး ပြောမယ်ဆိုရင် လဲ ကိုယ်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ခုခေတ်မှာ ၁၀၀ မှတ်ပြည့်တဲ့ ယောက်ျားဆိုတာ ရှိသေးလို့လား။ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ယောက်ျား တကယ်တမ်း အမှတ်ပြည့်ပေးကြည့်တော့လဲ အလွန်ဆုံး ရမှာ ဂုဏ်ထူးနားကပ်တဲ့ ၇၀ ပေါ့။ (ဂုဏ်ထူး မထွက်ဘူးနော် ဂန်ဒူးတွေ ပဲ ဂုဏ်ထူးထွက်တာ) ဥပမာ ကိုယ်က တပြိုင်တည်းမှာ အမှတ် ၇၀ တန် ယောက်ျား သုံးယောက်ကို လေ့လာနေ
တယ် ဆိုပါတော့ (မှတ်ချက် ဒီနေရာမှာ ယောက်ျားတွေ ဆိုရင် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘယ်တော့မှ မျက်နှာများတယ် မသုံးတာ သတိချပ်ပါ နောက်ပြီး ရှေးလူကြီးတွေ ပြောသလို ပြောရမယ် ဆိုရင်လဲ ရည်းစာတထောင် လင်ကောင်
တယောက်မှလား လျှာရှည်လေ တွေ့ရှိလေ လေနော် များများလေ့လာမှ ကောင်းကောင်းရမယ်) ကဲ ၇၀ တန် ၃ ယောက်ပေါင်းလိုက်တော့ ၂၁၀ မနေဘူးလား။ ၁၀၀ % ပြည့် တယောက်ထက် ၁၁၀ တောင်မှ ပိုနေသေးတယ်။
ကိုယ်က တကယ့်ကို ရှုပ်ထွေးတဲ့ အချစ်နဲ့ ယောက်ျားတွေကို လေ့လာတော့မယ် ဆိုပါတော့ သေချာတာကတော့ ကိုယ်တွဲနေတဲ့ တခြား ယောက်ျားတွေမသိအောင် လုပ်ရပါမယ်။ ယောက်ျားတယောက်သာ ရည်စား အများကြီး တပြိုင်တည်း ထားမယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ လို့ သူ့ဖိနပ်ကို စီးပြီး တွေးကြည့်ပါ။ တချို့မိန်းမတွေကျတော့လဲ
တချို့ ယောက်ျားတွေနဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး။ အများစုကတော့ ဓလေ့ ထုံးစံ၊ ကာချရယ်၊ မိရိုးဖလာ ဘာညာ ဘာညာ ပလာပလာပလာ တွေ နဲ့ တယောက်ဆို တယောက် ပိတောက်ဆို ပိတောက် လုပ်ကြပါတယ်။ (ဒါကတော့ ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့လမ်းပါပဲ)
တကယ်လို့ကိုယ်ရှာဖွေတာက အရေအတွက်ဆိုရင်တော့ ပေးဆပ်မှု ဆိုတာကလဲ သူ့အထိုက်အလျောက် နဲ့သူ
တော့ ရှိမှာပေါ့။ မမေ့ဖို့ တခုကတော့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ အချစ်တွေနဲ့ ကိုယ်က အကောင်းဆုံးကို ရှာဖွေနေတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် နောက်ဆုံးမှာ ရမယ့် ရလဒ်နဲ့ ပြန်ကာနိုင်အောင်တော့ ကြိုးစားရမယ်။ အဲ့လို အကောင်းဆုံး ဆိုတာ ကို လိုချင်လို့လဲ လေ့လာခြင်းဆိုတာ ကို ပြုနေတယ် ဆိုတာ အမြဲ အမှတ်ရပါ။ ယှဉ်ရွေးတယ် ဆိုတာ နှိုင်းယှဉ်စရာ ရှိမှ မှလား နှိုင်းယှဉ် ရမယ် ဆိုကတည်းက တခု တကောင် တယောက် ထက် ပိုတာ ကို ပြောတယ် ဆိုတာ သေချာ သဘောပေါက်ရပါမယ်။ အဓိက က အဆုံး သတ် ရလဒ် သည် ကိုယ်လိုချင်တာ ဖြစ်ဖို့ပဲ။ ကြားမှာ ဖြစ်တာ က ဖြစ်စဉ် တွေပေါ့။ ဖြတ်သန်းမှုပေါ့။ ဖြတ်သန်းမှု ဆိုတာလဲ ယူတတ်ရင် အတွေ့အကြုံပါပဲ။
ကောင်လေးတွေအများကြီး ကိုလေ့လာနေဆဲ မှာ ကိုယ့်ရဲ့ လေ့လာမှု က အကြောင်းတခုခုကြောင့် ပေါ်သွားတယ် ဆိုပါတော့။ ဒီလို ရှုပ်ထွေးတဲ့ အချစ် ကို ကစားတဲ့ သူ ကောင်မလေး တွေမှာ ပြောစရာ စကားတခွန်း ရှိပါသေးတယ်။ တခါတည်း သင်ပေးလိုက်မယ်။ ဓါတ်လုံးပေါ့။ ရေစိမ်သောက် သေးပေါက်တယ် အားနဲ့ ပစ်ရင် အဝေးရောက်တယ်။ လိုသလို သာကြည့်သုံး။
“မီးက မျက်နှာ များတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေ အချစ်ခံချင်တာပါ” မျက်နှာ ပြုံးစူစူလေးနဲ့ ပြော။
ကဲ ဖေ့ဘွခ် က ကွန်ပလီကိတ်တက် ရီလေးရှင်းရှစ်ပ်များ ဝမ်းသာကြစေကုန်။
Posted by တီချမ်း at 4:21 PM
mstint April 20, 2012 at 5:15 PM
ရှုပ်ထွေးတဲ့အချစ် ဆောင်းပါးလေး ဖတ်သွားတယ် တီချမ်းရေး)
လိုက်လို့မမှီတော့တဲ့ ခေတ်ကြီးမှာကွန်ပလီကိတ်တက် ရီလေးရှင်းရှစ်ကို
တီတင့်အတွက်တော့ လေ့လာစရာလိုတော့ဘူးလေ :P
EEK April 20, 2012 at 5:33 PM
I go and check my status on my facebook profile after reading your post. Luckily, I posted as 'Single'. Phew!!!
SHWE ZIN U April 20, 2012 at 6:08 PM
အပေါ်က အမတင့် ကတော့ ကွန်ပလီကိတ်တက် ရီလေးရှင်းရှစ် တွေမလိုတော့ဘူး ရွှေစင်ဦး တို့ကတော့ ငယ်သေးတယ် .. ဟဲဟဲ
မြတ်ကြည် April 22, 2012 at 4:42 PM
တီချမ်းလည်း ကွန်ပလီကိတ်တက် လုပ်ထားသလားလို့။ ခေတ်နဲ့ အညီပြေးတဲ့ တီချမ်း။ :)
Anonymous April 23, 2012 at 12:20 PM
အပြည့် အ၀ အားပေးတယ်
ယောက်ျားတွေ ရဲ့ ပြိုင်ပွဲ
ငါ မင်းကို မိုးတိမ်တွေပေါ်မှာ ချစ်မယ် (အခန်း-က-၁၂)
တီချမ်း နဲ့ ဆေးရောင်စုံ ထမင်းပွဲ
ကျမ ချစ်မိ အလုပ်ရှုပ်သည်
ငါ မင်းကို မိုးတိမ်တွေပေါ်မှာ ချစ်မယ် (အခန်း-က-၁၁)
တီချမ်း ကမ်ဘတ် စားကောင်းလို့ အဝင်မသတ်နိုင်
လည်၊ စား၊ ချဉ်၊ သုပ်၊ ကြော်
TCKO (T Chen Kyae O)
ကျန်းမာရေး နဲ့ မုန့်လက်ကောက် (ဘာမှမဆိုင်)
Bug and Bee Bangkok SUCKs
邓紫棋 - 光年之外 (吉他谱 Chords) - *Chords*